Puerto Rico - Famerenana amin'ny laoniny | Fiaretana haran-dranomasina
Puerto Rico - Famerenana amin'ny laoniny
Puerto Rico, Etazonia
Tamin'ny volana septambra 2017, ny rivo-doza Irma sy Maria dia nandringana ny nosy Porto Rico. Ankoatra ny fiantraikan'ny rivodoza tany an-tanety, dia nisy ihany koa ny fiantraikany tamin'ny vatohara tao Puerto Rico, izay fiarovana voalohany amin'ny nosy amin'ny onja sy tondra-drano. Ny fanadihadian'ny ad hoc natao taorian'ny soritry ny rivo-doza dia nitatitra fahavoazana teo amin'ny lohan-doko lehibe nopotehina na nipoitra tamin'ny fasika ho fasana sy fandevenana. Raha ny fantatra, ny kirihitr'ireo rakotra haran-dranomasina sy ny Endangered Species Act (ESA) izay efa fantatra taloha dia nanisy lisitra ny vatohara elkhorn (Acropora palmata) dia nanaporofo ny fisian'ny kolonisa manan-danja noho ny karazana fandrefesana karazana sy ny toerana teo amin'ny vatohara ho fiatoana amin'ny onja voajanahary. Nisy fahasimbana maro koa narahina tamin'ny vatohara avy amin'ny karazana vatohara Karaiba lehibe Orbicella spp. (karazana kintana), izay karazan-tsakafo ESA hafa ankoatra ny karazam-borona hafa. Noho izany, ny FEMA dia nanendry ny NOAA hitarika ny fanombanana ny valin'ny fanelingelenan'ireo onjan-dranomasina eny amin'ny vatohara.
Tapaka sy potika vongana elkhorn (Acropora palmata) aorian'ny rivo-doza. Sary © NOAA
Ankoatra ny fanombanana ny toeran'ny vatohara Pôrtô Rikô taorian'ny rivo-doza Irma sy Maria, ny FEMA dia nanendry ny NOAA mba hanao fitiliana an-jatony mba hiarovana sy hanavao ny vatohara velona mbola velona. Ny traikefa teo aloha dia naneho fa ny vatohara izay nihatra ara-batana dia manana safidy lehibe kokoa ho tafavoaka velona noho ireo tsy navela. Tokony ho am-polo taonany no nanangona ireo vatohara goavambe izay nisy fiantraikany, mifanohitra amin'ny minitra mba hamerenana azy amin'ny vatohara. Noho izany, mifanaraka amin'ny fanombanana, dia nisy ny fitsangatsanganana an-jorom-bala tena nisy fiantraikany teo amin'ny vatohara.
Ny fitambaran'ny 414,354 m2 ny haran-dranomasina ary mihoatra ny 86,000 ny haran-dranomasina, dia nohadihadiana tao amin'ny toerana 153 manerana an'i Puerto Rico eo anelanelan'ny Febroary 25 sy May 7, 2018. Manodidina ny kodiarana haran-dranomasina 9,760 na kolontsinina haran-dranomasina efa natsangana tany amin'ny haran-dranomasina tao amin'ny tranokala 69 any amin'ny faritra Avaratratsinanana, Avaratra ary Vieques eo anelanelan'ny febroary sy jona 2018.
NOAA, Departemantan'ny harena voajanahary Puerto Rico, ary SeaVentures dia nanamarina ny vatohara maranitra manodidina an'i Pôrtô Rikô ary nitarika ny fanamafisana ny sarin'ny vatohara niparitaka. Nampiasa fandaharam-pitsapana probabilistic izahay mba hanaovana fanombanana mba hametrahana fanovozan-kevitra ara-statistika avy amin'ny famolavolana toeram-pitrandrahana harena an-dranomasina lehibe izay mety ho simba noho ny rivo-doza. Ny rindrina samihafa dia nanarona ireo vatohara rehetra any amin'ireo reniranon'i Puerto Rico, Vieques, Culebra, ary ireo nosy ao amin'ny làlana NE Reserve. Ny fametrahana tambajotra samihafa, ahitana singa tsirairay mitazona ny 50 x 50 m, dia nampifanarahina tamin'ny drafitry ny fakan-tsarimihetsika NOAA an'ny National Coral Reef Monitoring (NCRMP), izay nampiasaina nanomboka tamin'ny 2014 mba hanara-maso ny haran-dranomasina sy ny trondro manodidina an'i Puerto Rico. Ho an'ity ezaka ity dia nitombo ny singa samihafa mba hifantohana amin'ny toeram-ponenana voapoizina ambany kokoa noho ny 7 metatra (m), izay tena voa mafy noho ny fanadihadiana momba ny fandinihana. Mba hampitomboana ny fahombiazan'ny sampling ary hiantohana ny fisoloana vava avy amin'ireo nosy ireo, ny endriky ny modelim-pifanarahana dia nokarohina tamin'ny làlan'ny tafio-drivotra, ny toeram-pitrandrahana haran-dranomasina ary ny faritra geografika.
Ny fanadihadiana ny fanadihadiana, natao ho haingana dia haingana be, araka ny azo atao, dia ahitana karazana karazana fandinihana roa misintona anaty rano: fanadihadiana momba ny fanodinkodinana sy fanadihadiana. Ny tranokalan'ny fanadihadiana dia natao nifototra tamin'ny tetik'ady noforonina noforonina nofaritana etsy ambony mba hametrahana ny antontan'isa momba ny faritra tsy mbola nisy fanadihadiana. Ny divers dia nitarika ny fanadihadiana an-tserasera amin'ny alàlan'ny fandrindrana ny habaka. Ny fanadihadiana natao dia namelabelatra momba ny faritra lehibe iray ivelan'ny fanodinkodinana tombanana izay mety nisy fiantraikany. Ny fanadihadiana natao ihany koa dia notanterahana tany amin'ny toerana tsy fantatra izay nampahafantarin'ny manam-pahaizana momba ny harena ambony momba ny karazana laharam-pahamehana na ny fahavoazana andrasana.
Ho an'ny tranonkala fanamarinana tsirairay sy ny toerana famandrihana, dia manimba ny tranokala, ny fahasimbana amin'ny vatohara sy / na ny rafitra, ny mety ho toy ny tranokala fitsangatsanganana ary ny mety ho toy ny tranokala famerenana amin'ny laoniny. Ao anatin'ny faritra fanadihadiana, karazana karakarary karazana sy kilasy lehibe, fahasimbana sy karazana fahasimbana ary aretina. Ho an'ireo fanadihadiana roa ireo, ny faritra fanadihadiana dia voamarika, ny GPS na ny lalao voarakitra, ary ny sarin-tany dia nangonina. Ny data dia voarakitra an-tserasera ary nalefa ho amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoArcGISOnline Dashboard / Storymap ao anatin'ny andro 1-3 mba hampahafantarana ny ekipa mpamaham-bolongana momba ireo tranonkala ahafahana miala sasatra.
Peta-drindrina fanadihadiana momba ny rivo-doza Puerto Rico sy ny tetikasan'ny tetikasa. © NOAA
Ny ampahany amin'ny haran-dranomasina vaky na potipotiky ny tafio-drivotra dia afaka mijanona ho velona hatrany ambany, saingy atahorana ho tototry ny onja-drivotra manaraka, izay hitohy hampihena ny vatam-bato velona amin'ny vatohara. Amin'ny alàlan'ny fanaovana fitsangatsanganana haran-dranomasina, ireo vatohara malalaka atahorana ireo dia natsofoka tany amin'ny substratum haran-dranomasina mba hampihena ny fahasimban'ny rivodoza amin'ny mizana eo an-toerana. Ny fiankinan-doha dia natao tany amin'ireo toerana fantatra fa misy fahasimbana avo indrindra amin'ny fanaraha-maso sy ny fanadihadiana fanombanana ara-dalàna mifantoka amin'ny toerana misy tombony be indrindra. Ekipa iray tsy latsaky ny 4 ny mpanazatra voaofana no nandeha nitety ny tranokala efa voafaritra mialoha ary nanomana fitaovam-piadiana (oh: boaty, kitapo atsangana) ary fitaovana (oh: simenitra, marmolina) hanaovana hetsika fanaovana triage. Ny fanomanana dia natao arakaraka ny isa, habe ary karazana haran-dranomasina andrasana ao amin'ilay tranokala manokana. Indray mandeha tao anaty rano dia nizara ny tenany manodidina ilay tranokala ny mpisitrika mba hanombohana hetsika telo. Ny toerana sahaza azy misy hardbottom malalaka dia fantatra mba hametahana haran-dranomasina malemy ary tsy hanelingelina ireo vatohara tsy misy simba misy. Ny haran-dranomasina sy ny sombin-kazo dia nesorina vetivety teo akaikin'ny toerana fanarenana talohan'ny fananganana indray. Ny simenitra dia nampiasaina hametahana indray ny vatohara amin'ny vongan-tany. Ny velaran-dranomasina dia nodiovina tamin'ny ahidrano sy sediment talohan'ny fananganana indray mba hanomezana adidy simenitra mahomby. Ny angon-drakitra momba ny habaka avy amin'ny triage (vato harana #, faritra) dia nakarina tao amin'ny misokatra amin'ny varavarankely vaovaoArcGISOnline Dashboard.
Ny ekipa mpitaingin-tsoavaly dia samy manana ny vatohara alohan'ny hisintonana azy ireo any amin'ny harambato (Vieques South Bank). Sary © NOAA
Tsy mbola nisy ny fanaraha-maso ny fitsangatsanganana taorian'ny fitsangatsanganana. Ireo fitsidihana tsy ara-potoana dia nampiseho ny fahaveloman'ny vatohara naverina indray.
Ny lesona azo avy amin'ity tetikasa ity dia ahitana:
Amin'ny toe-javatra sasany, ny toeram-ponenana tao amin'ilay tranokala simba dia tsy mety ho an'ny fanavaozana ny vatohara efa simba. Tao anatin'ireo tranga ireo dia nangonina ny sombin-tsoratry ny vato harana ary nifindra tany amin'ny tranokala hafa ho tsara kokoa noho ny famindrana maharitra ny vatohara.
Ny fananana olona voatokana ho an'ny olona iray dia nametraka ny fizotry ny angon-drakitra ary nanamora ny fampitaovana haingana teo amin'ny ekipa fanombanana sy ny fidirana amin'ny data.
Tsy sarotra ny toetr'andro.
Ny fanombanana ny fanombanana sy ny fitsangatsanganana dia ahafahana manatontosa fanaraha-maso ara-tsiansa.
Taorian'ny rivo-doza, dia efa ho tapitra ny 6 volana talohan'ny nanombohan'ny tetikasa. Ny mari-pamantarana skeleton mamiratra vao haingana dia maty noho ny alika. Noho izany, ny valin'ny fahasimbana atolotr'ity fianarana ity dia ny mpandala ny nentin-drazana.
Ny famatsiam-bola ho an'ny tetikasa dia natolotry ny United States Federal Emergency Management Agency (FEMA) sy ny National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFitantanana ny ranomasim-pirenena amerikanina sy Atmospherika (NOAA)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoDepartemantan'ny harena voajanahary sy tontolo iainana Puerto Rico (DRNA)
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoSeaVentures, Inc.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoFanaraha-maso sy tohatra Fiaran-dranomasina ao Puerto Rico ArcGISOnline Dashboard